China 304/316 Stainless Steel Wire Rope 7×7/7×19 1.0mm~12mm စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Bangyi
304/316 Stainless Steel ဝါယာကြိုး 7×7/7×19 1.0mm~12mm
အရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်သူ၊ 304/316 သံမဏိကြိုးကြိုး၊ သတ်မှတ်ချက်အပြည့်အစုံသည် ချောမွေ့သောအသွင်အပြင်ကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကောင်းမွန်သောချေးခုခံမှုနှင့် ပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြီးမားသောဘေးတိုက်တွန်းအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အဝတ်ကြိုး၊ ဆွဲကြိုး၊ လွှင့်ကြိုး၊ ကြိုးဆွဲကြိုးများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
အရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်သူ၊ 304/316 သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး။Specification အပြည့်အစုံကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ချောမွေ့သောအသွင်အပြင်၊ ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်နှင့်ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်၊ ကြီးမားသောဘေးတိုက်တွန်းအားများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ပစ္စည်း-201၊ 304၊ 316 စသဖြင့်
အင်္ဂါရပ်များ: ချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်နိမ့်ကျမှု၊ ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ
အလေးချိန် Min.Breaking Load (KN)
(မီလီမီတာ) (ကီလိုဂရမ်/၁၀၀မီတာ) 1570 N/MM² 1770 N/MM² 1570 N/MM²
၀.၃ ၀.၀၅ ၀.၀၇၈ ၀.၀၈၈ ၀.၀၉၃
၀.၄ ၀.၀၆ ၀.၁၃၈ ၀.၁၅၆ ၀.၁၅၇
၀.၅ ၀.၁၃ ၀.၂၁၆ ၀.၂၄၃ ၀.၂၅၅
၀.၆ ၀.၁၈ ၀.၃၁၁ ၀.၃၅၀ ၀.၃၈၂
၀.၈ ၀.၃၂ ၀.၅၅၂ ၀.၆၂၂ ၀.၆၆၇
၁.၀ ၀.၅၀ ၀.၈၆၃ ၀.၉၇၃ ၁၀၀၀
၁.၂ ၀.၇၂ ၁.၂၄၂ ၁.၄၀၁ ၁.၃၂၀
၁.၅ ၁.၁၃ ၁,၉၄၀ ၂.၁၉၀ ၂,၂၀၀
၁.၈ ၁.၆၂ ၂,၈၀၀ ၃.၁၅၀ ၂,၈၀၀
2.0 2.00 ၃,၄၅၀ ၃,၈၉၀ ၃,၄၂၀
၂.၅ ၃.၁၃ ၅,၃၉၀ ၆.၀၈၀ ၅,၉၄၀
၃.၀ 4.50 ၇,၇၇၀ ၈,၇၅၀ ၇,၆၉၀
4.0 ၈.၀၀ ၁၃,၈၀၀ - ၁၃,၇၀၀
၅.၀ ၁၂း၅၀ ၂၁,၆၀၀ - ၂၁,၄၀၀
၆.၀ ၁၈း၀၀ ၃၁,၁၀၀ - ၃၀,၈၀၀
၀.၄ ၀.၀၈ ၀.၁၃၂ ၀.၁၄၉ ၀.၁၇၀
၀.၅ ၀.၁၃ ၀.၂၀၆ ၀.၂၃၂ ၀.၂၄၀
၀.၆ ၀.၁၈ ၀.၂၉၇ ၀.၃၃၅ ၀.၃၄၃
၀.၈ ၀.၃၂ ၀.၅၃၀ ၀.၅၉၀ ၀.၆၁၇
၁.၀ ၀.၅၀ ၀.၈၂၀ ၀.၉၃၀ ၀.၉၅၀
၁.၂ ၀.၇၂ ၁.၁၉၀ ၁.၃၄၀ ၁.၂၇၀
၁.၅ ၁.၁၃ ၁,၈၅၀ ၂.၀၉၀ ၂,၂၅၀
၁.၈ ၁.၃၂ ၂,၆၇၀ ၃.၀၁၀ ၃,၁၀၀
2.0 2.00 ၃,၃၀၀ ၃,၇၂၀ ၃,၈၂၀
၂.၅ ၃.၁၃ ၅.၁၅၀ ၅,၈၁၀ ၅,၅၈၀
၃.၀ 4.50 ၇,၄၂၀ ၈.၃၆၀ ၈း၀၃၀
4.0 ၈.၀၀ ၁၃။၁၉၀ - ၁၃,၉၀၀
၅.၀ ၁၂း၅၀ 20,610 - ၂၁,၀၀၀
၆.၀ ၁၈း၀၀ ၂၉,၇၀၀ - ၃၀,၄၀၀
၈.၀ ၃၂.၀၀ ၅၂,၈၀၀ - ၅၂,၈၀၀
၁၀.၀ 50.00 ၈၂,၄၀၀ - ၈၂,၅၀၀
၀.၈ ၀.၂၆ ၀.၃၉၀ ၀.၄၄၀ ၀.၄၆၁
၁.၀ ၀.၄၁ ၀.၆၁၀ ၀.၆၉၀ ၀.၆၃၇
၁.၂ ၀.၅၈ ၀.၈၈၀ ၀.၉၉၀ ၁,၂၀၀
၁.၅ ၀.၉၁ ၁.၃၇၀ ၁.၅၅၀ ၁.၆၇၀
၁.၈ ၁.၃၂ ၁,၉၇၀ ၂.၂၃၀ ၂,၂၅၀
2.0 ၁.၆၂ ၂,၄၄၀ ၂,၅၄၀ ၂,၉၄၀
၂.၅ ၂.၅၄ ၃.၈၁၀ ၄.၂၉၀ ၄,၃၅၀
၃.၀ ၃.၆၅ ၅,၄၈၀ ၅,၇၂၀ ၆,၃၇၀
4.0 ၆.၅၀ ၉,၇၅၀ ၁၀,၂၀၀ ၉,၅၁၀
၅.၀ ၁၀.၁၅ ၁၅၊၂၃၀ ၁၅,၉၀၀ ၁၄,၇၀၀
၆.၀ ၁၄.၆၂ ၂၁,၉၀၀ ၂၂,၉၀၀ ၁၈,၆၀၀
၈.၀ ၂၅.၉၈ ၃၉၀၀၀ ၄၀,၇၀၀ ၄၀,၆၀၀
၁၀.၀ ၄၀.၆၀ ၆၀,၉၀၀ ၆၃,၅၀၀ ၅၇,၁၀၀
၁.၅ ၀.၉၂ ၁.၂၆ ၁.၄၃ ၁.၄၃
2.0 ၁.၆၃ ၂.၂၇ ၂.၅၆ ၂.၅၆
၂.၅ ၂.၅၅ ၃.၅၅ 4.00 4.00
၃.၀ ၃.၆၈ ၅.၁၂ ၅.၇၇ ၅.၇၇
4.0 ၆.၅၃ ၉.၀၉ ၁၀.၂၅ ၁၀း၇၀
၅.၀ ၁၀.၂၁ ၁၄.၂၁ ၁၆.၀၂ ၁၇း၄၀
၆.၀ ၁၄း၇၀ 20.50 ၂၃.၁၀ ၂၃.၅၀
၈.၀ ၂၆.၁၄ ၃၆.၄၀ ၄၁း၀၀ ၄၀၊၁၀
၁၀.၀ ၄၀.၈၄ ၅၆.၈၀ ၆၄.၁၀ ၅၆.၈၀
7*7 သည် 7*19 ထက် ပိုခိုင်ခံ့သော ဝန်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
7*19 သည် 7*7 ထက် နူးညံ့မှုရှိသည်။
1. ခိုင်ခံ့မှု မြင့်မားပြီး ကွဲရန်မလွယ်ကူပါ။
ပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စတီးဝါယာကြိုးများ လိမ်ခြင်းနှင့် ချည်နှောင်ခြင်းများကို လျှော့ချရန်အတွက် အဆင့်မြင့် ဝါယာကြိုးဆွဲစက်ကို အသုံးပြုထားသည်။ကောင်းသောအအေးပေးစွမ်းဆောင်မှု၊ သံမဏိဝါယာကြိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
2. အလွှာအလိုက် တိကျသောစက်ဖြင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း အလွှာ
7×19 အလွန်ပျော့ပျောင်းသော သံမဏိကြိုး ၁၃၃ ကြိုးသည် ကြိုးအဆုံးတစ်ဝိုက်တွင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဒဏ်ရာရှိပြီး တင်းကျပ်ပြီး လျော့ရဲခြင်းမရှိသဖြင့် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို အာမခံပါသည်။
3. ကုန်ကြမ်းများကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါယာကြိုးကြိုးအား အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးမြင့် 304 သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ burrs မပါဘဲ၊ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
1. ဆွဲခြင်း-တွန်းလှေ၊ ရေပေါ်၊ ကုန်တင်ပိုက်
2. ပြုပြင်ခြင်း-ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဗို့အားမြင့်တိုင်များ စသည်တို့ကို ပြုပြင်ရန်အတွက် ဝါယာကြိုး၊
3. ရုတ်သိမ်းခြင်း-ဓာတ်လှေကားများ၊ မိုင်းများ၊ ကေဘယ်ကားများ
4. အသီးအနှံ-ဓာတ်လှေကား၊ တံတား၊ ကေဘယ်လမ်း
ယခင်- မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိန်းချုပ်ရေးကေဘယ်လ် ဘရိတ်ကေဘယ်လ် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကြိုး 1*19 7*7 ကေဘယ်လ်
နောက်တစ်ခု: China 304 Stainless Steel Wire Rope
7x7 304 စတီးဝါယာကြိုးကြိုး
aisi stainless steel ဝါယာကြိုး
ကျစ်ထားသော stainless steel ဝါယာကြိုး
ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။, ကြိုးခုန်ဝယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ropeless skip ကြိုး, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်,